अष्ट्रेलियाबाट शिशिर भण्डारीले दुखी हुँदै बिन्ती गरे ! एक्कासी के भयो ? (भिडियो हेर्नुस) – " सुलभ खबर "
चर्चित कलाकार, सँचारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता शिशिर भण्डारी यतिबेला अष्ट्रेलियामा रहेका छन् । सामाजिक सेवामा हरदम कृयाशिल शिशिरले आफ्नो पहिलो बिदेश यात्रालाई रमाईलो र घुमघाममा मात्रै सिमित राखेनन् । नेपालमा रहेका दुखी पिडितहरुको सहयोगका लागि पनि उनले अपिल गरे । शिशिरले पढाईरहेका जनक गन्धर्वको शिक्षाका लागि अष्ट्रेलियामा हालसम्म १ लाख ६० हजार माथि
सँकलन भैसकेको छ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, अष्ट्रेलियाको मेलवर्न उपसमिति गठन कार्यक्रममा शिशिरलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । फेब्रुअरी २१ तारिकका दिन मेलवर्नमा एक कार्यक्रमका बिच उपसमिति गठन भएको हो । विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति सहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अष्ट्रेलियामा रहदै आएका स्थानीय कलाकारहरुले प्रस्तुति दिएका थिए ।
संस्थाका भिक्टोरिया राज्यका संयोजक हिरामणी गौतमको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा सुनिल पराजुली, सचीवमा माधव न्यौपाने, कोषाध्यक्षमा मानु धमला, तथा सदस्यहरुमा शान्ती गौतम, प्रकाश पौडेल, सायद श्रेष्ठ, बिष्णु भट्टराई तथा
सन्तोष सापकोटा रहेका छन । चरम गरिबीमा पिल्सिएका एक सुस्त मनस्थितिका परिवारमा हुँर्कदै गरेका एक १३ बर्षका बालक जनक गन्धर्वको परिवार तथा उनको पढाईलेखाइका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक देखिएको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, अष्ट्रेलिया शाखालाई जानकारी हुन आएपश्चात् शाखाले कलाकार तथा सामाजिक अभियान्ता शिशिर भण्डारीलाई सम्मान गर्दै सो रकम उनलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
संस्थाको मेलवर्न उपसमिति गठन कार्यक्रमसंगै एक गरिव बालकलाई संस्थाको तर्फबाट सहयोग गर्न पाउँदा हामी खुशी भएका छौं । आज गठन भएको समितिले राम्रोसँग काम गर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु । सिङ्गो समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु । संस्थाका अष्ट्रेलिया शाखा अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईले भने । भिडियो हेर्नुस